नयाँ संविधानअुनसारको कानुन बनाएर मुलुकलाई नीतिगत थिति बसाल्ने प्रक्रियामा रहेका बेला अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्याका संकेत देखिएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र बुभेका व्यक्ति मुलुकमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ र क्रान्तिबाट खारिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जेलजीवनको प्रमाणपत्रले अर्थतन्त्र नचल्ने भएकाले आफ्नो पार्टी नेकपाले दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार गठन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुद्धिविलाश गर्दै आएका पार्टी सदस्य डा. युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा चयन गरेको हुनुपर्दछ ।
तर पार्टीमा क्रान्तिबाटै आएका अरु कार्यकर्ता अर्थमन्त्रीका लागि दाबेदार विकल्प नभएका होइनन् । विकल्प थिए र छन् पनि । चुनाव जितेर कम्युनिष्ट पार्टीले पहिलो पटक दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउँदा विश्व समुदायमा नेपालमा वैधानिकरुपमा साम्यवाद आएको सन्देश जाने र त्यसले मुलुकलाई विकासको मागमा डो¥याउन अप्ठेरो पार्ने भएकाले क्रान्तिकारी विकल्प छाडेर पश्चिमापन्थी कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सजिलै शासन गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री बनाएको हुनुपर्दछ । तर अहिले प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्ड सफल भएको देखिएन ।
अहिले मुलुकमा अर्थतन्त्रका विज्ञ व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा पनि अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ जान सकेको छैन । नयाँ राजनीतिक परिवेशमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई प्रयोगशाला बनाइदिएका छन् । त्यही कारण कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा जताततै समस्यै समस्या देखिन थालेका छन् । सरकारले अघि बढाएको नियन्त्रणमुखी अर्थनीतिले समाजका हरेक क्षेत्रमा आर्थिक समस्या देखाउन थालेको छ । अहिले समाजका कुनै पेशा र वर्गमा अहिलेको अर्थनीतिले असर नपरेको भेट्टाउन सकिँदैन । सबैले ढाड सेकिएको महसुस गर्न थालेका छन् । नयाँ अर्थनीतिअुनसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्न नपाउँदै हरेक पेशा र व्यवसायका व्यक्ति वर्तमान अर्थनीतिप्रति सशंकित बनिसकेका छन् ।
जनस्तरमा त्यति धेरै नकारात्मक असर पर्दा पनि स्वयम् अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थतन्त्र अत्यन्त सकारात्मक दिशातर्फ गएको टिप्पणी गरेका छन् । तर उनको यो अभिव्यक्ति अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ । यथार्थमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छैन । बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै अगामी दिन अत्यन्त कष्टप्रद हुने देखिन्छ । तर त्यो कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकार नगर्नुले र जनताको समस्यालाई छाम्ने प्रयास नगर्नुले अर्थमन्त्री स्वयम् अर्थतन्त्रको शिकार खेल्न लागेको स्पष्ट हुन्छ तर यस्तो कलिलो लोकतन्त्र रहेको र यतिविधि कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका जनता भएको देशको अर्थमन्त्रीले आफ्नो मनको लहडअनुसार यसरी अर्थतन्त्रको शिकार खेल्नु हुँदैन । यसले जनतालाई उठ्नै नसक्ने गरी गरिबीको दुष्चक्रको भुमरीमा हाल्नेछ । त्यतिबेला राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र केही सुरक्षित रहनेछैन किनकि खाली पेटका जनताले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न सक्दैनन् । यति सामान्य कुरालाई अर्थतन्त्रका ज्ञाता अर्थमन्त्रीले नबुझ्ने कुरै आउँदैन तर बुझपचाएर यसरी अर्थतन्त्रको शिकार गर्नु कालान्तरमा जनघात मात्र होइन, राष्ट्रघात पनि ठहरिनेछ ।